Commonwealth Heads of State kusangana muRwanda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Commonwealth Heads of State kusangana muRwanda
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Rwanda Breaking News • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
rwandan gomo gorilla
Mushure mekumiswa kwayo gore rino, iyo Commonwealth Heads of Government Musangano (CHOGM) ichaitirwa muna Chikumi gore rinouya muguta guru reRwanda Kigali.
Iyo biennial Heads of State Meeting kubva kuCommonwealth states yanga ichizoitirwa muguta guru reRwanda muna Chikumi gore rino asi yakamiswa nekuda kwekukanganiswa nedenda re COVID-19.
Commonwealth Secretariat muLondon yakati muchirevo chayo chazvino kuti zuva idzva rakabvumiranwa nenyika dzenhengo richava svondo raChikumi 21, 2021 uye musangano uyu unotarisirwa kuunza pamwechete makumi mashanu nenomwe nyika dzeCommonwealth.
Musangano wegore rinouya uchava chiitiko "chakasarudzika" chekuzeya pamwe chete pazvinetso zvakakura zvehunyanzvi, zvecology, uye zvehupfumi nemikana iri kutarisana neCommonwealth, kunyanya vechidiki venyika, vari "kunyanya kushamisa" nekuda kweECVID -19 denda, akadaro Mutungamiri weRwanda, Paul Kagame.
Musangano weKigali uchave wechipiri kuitirwa kuEast Africa. Musangano wekutanga wakaitwa muna 2007 kuUganda.
"CHOGM inotarisira kuti vatungamiriri veCommonwealth vauye pamwechete kuti vatore matanho anokosha pazvinhu zvakakosha zvatakatarisana nazvo tese," akadaro Munyori Mukuru weCommonwealth Patricia Scotland.
Vatungamiriri veCommonwealth vanotarisirwa kuti vakurukure post-COVID kugadzirisa, asiwo shanduko yemamiriro ekunze, hupfumi hwepasirese, kutengeserana nekusimudzira kwakasimba, izvo zvinofanirwa kugadziriswa "nekukurumidza" kuburikidza "nekubatana kwenyika dzakawanda nekutsigirana, akadaro.
Musangano wevatungamiriri uyu uchatungamirwa nemisangano yevamiriri vanobva kunetiweki dzeCommonwealth dzevechidiki, vakadzi, veruzhinji uye bhizinesi
CHOGM ndiyo musangano wepamusoro weCommonwealth pamwe nekugadzira mitemo. Mumusangano wavo wekupedzisira wakaitirwa muLondon muna 2018, vatungamiriri veCommonwealth vakasarudza Rwanda semusangano wemusangano unotevera gore rino vasati vamboimisa mushure mekupararira kwedenda re COVID-19.
Imba kune vanhu mabhiriyoni 2.4 uye inosanganisira hupfumi hwapamberi nenyika dzichiri kusimukira, nhengo dzayo makumi matatu nematatu idunhu diki, kusanganisira Rwanda, imwe yenhengo diki dzeCommonwealth dzisina hukama hwekare neBritain hwakatangira panguva yekoloni.
Iyo yaimbova koloni yeBelgian, Rwanda yakabatana nesangano reAnglophone mu2009, mushure mekunge hurumende yayo yafunga kushandura nhanho yedzidzo kubva kuFrench kuenda kuChirungu.
CHOGM inowanzoitirwa makore maviri ega ega uye musangano wepamusoro weCommonwealth nekuita gwara. VERENGA ZVAKAWANDA